November 23, 2019 - Myitter
မယားငယ်သွားခိုးတာ မယား ကြီးကပါလို က်ပါကူညီခဲ့တဲ့ ကသာမြို့နယ်က ထူးဆန်းဖြစ်ရပ်
November 23, 2019 Myitter 0
မယားငယ်သွားခိုးတာ မယား ကြီးကပါလို က်ပါကူညီခဲ့တဲ့ ထူးဆန်းဖြစ်ရပ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာမြို့ရပ်ကွက် ၉ ကန့်ကော်တန်းမှာနေတဲ့ သန်းဝင်း၂၆ နှစ်ဆိုသူက ဗန်းမောက်မြို့မှာနေတဲ့ မ———-၂ဝနှစ်ကို သူ၏မယားကြီးနဲ့အတူ သွားရောက်ခိုးယူခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ် ဖြစိခဲ့ပါတယ် …. ။ ကလေးမကိုခိုးယူပေါင်းသင်းလို့ ပြန်ခွဲခဲ့တာ ၃ကြိမ်ရှိပြီလို့ သိရပါတယ် …. ။ အခုတကြိမ်သွားခိုးတော့ […]
သမီးပျောက်လို့ အပူမီးဝိုင်း နေရှာတဲ့ ဖခင်
သမီးပြောကျလို့ အပူမီးဝိုငျးနတေဲ့ ဖခငျ အတှကျ ကူညီပွီး မြှဝပေေးကွပါနျော.. အရမျးကို အရေးကွီးပါတယျ (၁၃) နှဈအရှယျ သမီးလေး ပြောကျနလေို့ ကူညီပေးကွပါလို့ တောငျးဆိုပါရစေ။ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး ပွညျကွီးတံခှနျမွို့နယျ (ဆ)ရပျကှကျ အိမျနံပါတျ (ဒဒ/၅) မှာ နထေိုငျသော ဖခငျဖွဈသူ ကိုတငျမွငျ့ဇျော ရဲ့ သမီး […]
အကြောဆေး သွင်းချင်သူများ ဒါလေး ဖတ်ကြည့်ပါ ………
အကြောဆေး သွင်းချင်သူများ ဒါလေး ဖတ်ကြည့်ပါ !!! ရပ်ကွက်ထဲက၊ ရွာထဲက၊ လမ်းထဲက ဆေးခန်းတွေမှာ ခေတ်စားတဲ့ အသုံးအနှုန်းတခု ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို/ကျွန်မကို အကြောဆေးလေး သွင်းပေးပါ၊ ပုလင်းချိတ်ပေးပါ၊ ဆေးရောင်စုံလေး လွှတ်ပေးပါတဲ့။ ဒါတွေဟာ လူနာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်းနှီးပြီးသား စကားတွေပါ။ တချို့ဆိုရင် အကြောဆေးလေးများ တလတခါလောက်မှ […]
ရီယိုဖာဒီနန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိ အင်္ဂလန် နဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ဂန္တဝင်ကစားသမား ရီယို ဖာဒီနန်ဟာ ဒီနေ့ ညပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ် ။ ဖာဒီနန်ဟာ မနက်ဖြန် သုဝဏ္ဏဘူမီ E ven t Par k မှာပြုလုပ်မယ် […]
ကခငျြပွညျနယျမွဈကွီးနားမွို့တှငျကလေးသူခိုးမြားအကွီးအကယျြတောငျးကွမျးနေ မြစ်ကြီးနား၊ ယုဇနမှာ မိခင်တဦး ဆိုင်ကယ်ရှေ့မှာ သူမ ကလေးတင်ထားပြီး လမ်းဘေးခဏရပ်နေချိန် ကားအကောင်းစားနဲ့လူတစု ကလေးလုယူကာကားပေါ်တင်ပြေးသွားတယ်၊ လိုက်အော်လည်းမရတော့ဘူးလို့ ကလေးမိဘပြောပြသည်။ ကားမှန်တွေလည်း အနက်ရောင်စတီကာအပြည့်ကပ်ထားတယ်။အလာတူဖြစ်စဉ်မျိုးနောင်နန်း၁၀မိုင်မှာလည်း မိခင်နှင့်၎နှစ်အရွယ်ကလေး အတူလမ်းလျှောက်နေစဉ် အနက်ရောင်ကားတစ်စီအနားကပ်လာပြီးကလေးလက်ကိုလာဆွဲစဉ် မိခင်မှပတ်ဝင်းကျင်ကိုအော်ဟစ်အကူအညီတောင်းလိုက်စဉ်ထွက်ပြေးသွားကြောင်းကြားသိရသည်။ အဆိုပါကလေးသူခိုးများမှာ ယခုအခါကျောင်းဆင်းချိန်နှင့်အလပ်ချိန်များတွင်ကလေးငယ်များကို လိုက်လံချောင်းမြောင်းနေကြောင်းလည်းကြား သိရပါသည်။ ကျမတို့ကျောင်းနားမှာ ကားမှန်အပြည့်စတိကာအနက်ကပ်ထားတဲ့ကားတစ်စီး၃/၄ခေါက်ပတ်မောင်းနေတာတွေ့လို့ထွက်ကြည့်လိုက်ရာအဆိုပါကားမှာမောင်းထွက်သွားကြောင်းကျောင်းဆရာမတစ်ဦးမှပြောပြသည်။ အဆိုပါကလေးများရဲ့ကိုယ်တွင်းကလီဇာများကို […]
အက်စတာ ဒေါ့ချင်းဆုန်အတွက်အားပေးကြမ်းတဲ့ သူဌေးတစ်ဦးက ဖိုင်နယ်အတွက်ကိုလည်း သိန်း ၁၄၀၀ဖိုး Vote ပေးမည်
အက်စတာ ဒေါ့ချင်းဆုန်အတွက်အားပေးကြမ်းတဲ့ သူဌေးတစ်ဦးက ဖိုင်နယ်အတွက်ကိုလည်း သိန်း ၁၄၀၀ဖိုး Vote ပေးမည် အက်စတာ ဒေါ့ချင်းဆုန်အတွက် အပတ်စဉ် ၅၈သိန်းဖိုး Vote ပေးနေတဲ့ အားပေးကြမ်းတဲ့ သူဌေးတစ်ဦးက ဖိုင်နယ်အတွက်ကိုလည်း သိန်း ၁၄၀၀ဖိုး Vote ပေးမည် Myanmar Idol Season4[…]
မျက်နှာကြည့်ရုံနဲ့ ချမ်းသာမယ့်သူဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်သိနိုင်မယ့်နည်းလမ်း မျက်နှာကိုကြည့်ရုံနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်ချေရှိမရှိ သိနိုင်မယ့်နည်း(၈)နည်း လူ တစ် ယောက် ရဲ့ မျက် နှာကို ကြည့် ရုံ နဲ့ သူ့ အ ကြောင်း ကို အ တိ အ ကျ ပြော နို […]
ကျားဖောင်(သို့မဟုတ်)ငရဲခန်း(ဒါမှမဟုတ်)အစိုးရအာဏာမဲ့နေတဲ့ ဖျာပုံမြို့က လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ရာနေရာ
ကျားဖောင်(သို့မဟုတ်)ငရဲခန်း(ဒါမှမဟုတ်)အစိုးရအာဏာမဲ့နေတဲ့ ဖျာပုံမြို့က လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ရာနေရာ လောကငရဲပဲ ၂၀၁၈ ထဲအမျိုးထဲကတယောက်ပါသွားလို့ လိုက်ကယ်ဖူးတယ် အဲထဲက အချက်အလက်တွေစုထားတယ် ပြည်တွင်းမှာပထမဆုံး BBC က ဒီကိစ္စကိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ် ဒေါငြိမ်းရွာလဲ ပါတယ် ရေတပ်ကလူတွေလဲသိတယ် ဒေသအာဏာပိုင်တွေလွတ်တော်အမတ်တွေက အစ ပါးစပ်ပိတ်ထားကြတယ် သူတို့ရွာအဝင်လမ်းတွေဟာ ဓာတ်တွေသိတွေပဲလာ အပြင်လူတွေ ဒေသအာဏာပိုင်တွေ မလာအောင် လမ်းတွေကို […]